कोरोनाकालमा विश्वभरका कम्पनीहरुको लाभांश वितरणमा भारी गिरावट
काठमाण्डौ । कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा लगानीकर्ताहरुको भुक्तानी १२.२ प्रतिशत अर्थात १.२६ ट्रिलियन डलरले घट्दा विश्वव्यापी रुपमा कम्पनीहरुको लाभांश वितरणमा भारी गिरावट आएको छ। एसेट म्यानेजर ज्यानुस हेन्डरसनको ताजा विश्वप्यापी डिभिडेन्स इन्डेक्सले यस्तो देखाएको हो। इन्डेक्सका अनुसार विश्वभर कोरोना महामारीका कारण स्वास्थय...
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो सोमबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको कुल ६.७५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा चुक्तापुँजी १ अर्ब ६ करोड ८२ लाख ८८ हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड २०...
महुली लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको गत माघ २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिकको सञ्चित मुनाफाबाट संस्थाको चुक्तापुँजी १८ करोड ६६ लाख २० हजार रुपैयाँको कुल २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा २० प्रतिशतले हुन आउने ३ करोड ७३ लाख २४...
काठमाण्डौ । ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको हिजो बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षका लागि चुक्तापुँजीको कुल ४ प्रतिशतले हुन आउने २ करोड रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। जसमा बैंकको सेयर प्रिमियमबापत रहेको रकमबाट बैंकको चुक्तापुँजीको १ प्रतिशतले हुन...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब २ करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँको कुल ८.४२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको प्रस्तावित लाभांशमा ८ प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड २१ लाख १४ हजार ५६० रुपैयाँबराबरको बोनस...
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तद्वारा बम्पर लाभांश प्रस्ताव, बोनस सेयरमात्र ४९.४०%
काठमाण्डौ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बम्पर लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हालसम्म कायम चुक्तापुँजी ७ करोड ९२ लाख रुपैयाँको कुल ५२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा ४९.४० प्रतिशतले...
सबैको लघुवित्तद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो शनिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी १८ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँको कुल ११.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा १०.५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ९५ लाख ७७...
राष्ट्र बैंकद्वारा गणपति लघुवित्तको लाभांश स्वीकृति, कति छ बोनस ?
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश स्वीकृत गरेको छ। संस्थाद्वारा जारी सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृत गरेको पत्र गत माघ ९ गते पठाएको हो। राष्ट्र बैंकले गणपति लघुवित्त प्रस्ताव गरेको कुल १५.७९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृति गरेको छ। संस्थाले गत...
काठमाण्डौ । नेपाल पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीले गत आर्थिक वर्षका लागि हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब १५ करोड ३ लाख १३ हजार ४८५.६९ रुपैयाँको कुल १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लाभांशमा ८ प्रतिशतले हुन आउने ९ करोड २० लाख २५ हजार ७९ रुपैयाँबराबरको...
काठमाण्डौ । महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको हिजो बुधबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजी कुल १०.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित लभांशमा चुक्तापुँजी १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ३३ लाख...
स्वाभिमान लघुवित्तद्वारा २१.०५% लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट चुक्तापुँजी ७ करोड ६७ लाख ७ हजार ६४० रुपैयाँको कुल २१.०५ प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ६१ लाख ४९ हजार ८५२.६३ रुपैयाँबराबरको लाभांश प्रस्ताव गरेको हो�...